Otu puku ugboro ruo mgbe ebighi ebi, nke John Green dere
Akwụkwọ akụkọ ntorobịa nke oge a na -enye ọtụtụ ọgụgụ agụ maka ụdị dị iche iche. Enwere ndụ karịrị akụkọ ịhụnanya (nke na -ekwesịghị ịdị njọ, a na -ekwu ihe niile), mana ndị edemede na -achọ niche ha n'etiti ndị na -eto eto na -enwekarị otu echiche: ike. Ihe egwu siri ike, ịhụnanya ihunanya ...
Ụmụnne nwanyị. Njikọ na -enweghị njedebe, nke Anna Todd dere
Ọnọdụ ụmụnne na -agbanwe agbanwe bụ ihe na -akwụsịghị ịtụ ndị anyị bụ nne na nna n'anya. Mana gafere nyocha gbasara mmụọ nke mpụga, akwụkwọ a Sisters Lazos Infinitos na -ekwu maka njikọ dị n'etiti ụmụnne, na nke a n'etiti ndị akụkọ akụkọ anọ: ...